Bhutan Ngultrum Bitcoin
Boliviano saseBolivia Bosnia and Herzegovina uphawu convertible
Cayman Islands dollar Cordoba baseNicaragua
Costa Rica colon Cyprus ganda
Denar Macedonian Deutsche mark
Dinar Algeria Dinar Kuwaiti
Dinar waseLibya Dirham Moroccan
Dollar Jamaican Dollar Namibian
Dollar Zimbabwean Dollar entsha Taiwan
Dominican peso Dram-Armenian
Falkland Islands ganda Fiji dollar
Florin UmAruba Forint Hungarian
Franc Congolese Franc Swiss
Franc baseRwanda France frank
Ganda Egyptian Ganda Irish
Ganda Lebanese Ganda South Sudanese
Ganda Sudanese Ganda Syrian
Ghana Cedi Gibraltar ganda
Guernsey ganda Guinea franc
Hondura Lempira Hong Kong dollar
Hryvnia I-Troy ounce yesiliva
IZimbabwe dollar Iceland krone
Igolide elilodwa le-Troy / igolide electronic) Ikholoni El Salvador
Iraqi Dinar Israeli yeshekeli entsha
Jersey ganda Jordan dinar
Kazakhstani Tenge Kenya usheleni
Kwanza Kyat Burmese
Leone Leu Romanian
Leu baseMoldova Lev Bulgarian
Lira Maltese Lire Italian
Litas Lithuanian Lwesiliva Greek
Manat Azerbaijani Manx ganda
Mauritius Rupee Metical waseMozambique
Naira Nigerian Nakfa
NaseSurinam Guilder NaseSurinam dollar
New Zealand dollar North Won Korean
Okokuphrinta Ouguiya Mauritanian
Peseta Spanish Peso Argentine
Peso Uruguay Philippines peso
Quetzal laseGuatemala Rand
Rial Yemeni Riel Cambodian
Ruble Belarusian Ruble Russian
Rufiyana Maldivian Rupee Indian
Rupee Nepalese SDR (Special drawing amalungelo)
Saint Helena ganda Seychelles Rupee
Tolar Slovenian Trinidad and Tobago dollar
Tugrik-Mongolian Turkmenistan manat
URupiah Indonesian US dollar
Uganda usheleni Umqhele Danish
Uphawu Fin Usheleni Austrian
Usheleni Tanzanian Usheleni waseSomali
Vietnamesse dong WaseVenezuela Bolivar fuerte
Won South Korean Yen
Yuan Yugoslavian dinar entsha
Zambian Kwacha Zloty Polish
Izilinganiso namanani wokushintshaniswa kwezimali zezwe zomhlaba we- 2022.
Rand nezilinganiso ze 2022 ngosuku ngalunye. Rand nezilinganiso ze 2022 ngosuku ngalunye. Umlando wesilinganiso sokushintshwa kwanoma iyiphi imali yezwe ye- 2022 nsuku zonke.
Izinga lokushintshwa kwemali, izingcaphuno zohlobo lwemali lomhlaba 2021.
Database lomlando wesilinganiso sokushintshana. Database lomlando wesilinganiso sokushintshana. Izinga lokushintshanisa nezilinganiso ze 2021 ngosuku ngalunye.
Izinga lokushintshaniswa nezilinganiso ze- 2020.
Izinga lokushintshana noma izingcaphuno ze Rand ye 2020 enyangeni ngayinye nakuzo zonke izinsuku. Izinga lokushintshana noma izingcaphuno ze Rand ye 2020 enyangeni ngayinye nakuzo zonke izinsuku. Izinga lokushintshaniswa noma izingcaphuno zezimali zomhlaba 2020 enyangeni ngayinye nakuzo zonke izinsuku.
Umlando wezingcaphuno namanani wokushintshaniswa ku- 2019.
Nsuku zonke Rand isilinganiso sokushintshaniswa (isilinganiso) se 2019. Nsuku zonke Rand isilinganiso sokushintshaniswa (isilinganiso) se 2019. Umlando wezingcaphuno zemali zosuku ngalunye lwe 2019.
Izinga lokushintshaniswa nezilinganiso ze- 2018.
Umlando ophelele wezingcaphuno zohlobo lwemali nsuku zonke zonyaka ngamunye. Umlando ophelele wezingcaphuno zohlobo lwemali nsuku zonke zonyaka ngamunye. Isilinganiso sokushintshaniswa kwansuku zonke (isilinganiso) sezimali zomhlaba wonke ze- 2018.
Izilinganiso namanani wokushintshaniswa kwezimali zezwe zomhlaba we- 2017.
Rand nezilinganiso ze 2017 ngosuku ngalunye. Rand nezilinganiso ze 2017 ngosuku ngalunye. Izinga lokushintshaniswa noma izingcaphuno zezimali zomhlaba 2017 enyangeni ngayinye nakuzo zonke izinsuku.
Izinga lokushintshwa kwemali, izingcaphuno zohlobo lwemali lomhlaba 2016.
Izinga lokushintshanisa nezilinganiso ze 2016 ngosuku ngalunye. Izinga lokushintshanisa nezilinganiso ze 2016 ngosuku ngalunye. Sigcina umlando wazo zonke zezimali zamamayela ngosuku ngalunye.
Nsuku zonke Rand isilinganiso sokushintshaniswa (isilinganiso) se 2015. Nsuku zonke Rand isilinganiso sokushintshaniswa (isilinganiso) se 2015. Umlando wesilinganiso sokushintshwa kwanoma iyiphi imali yezwe ye- 2015 nsuku zonke.
Izilinganiso namanani wokushintshaniswa kwezimali zezwe zomhlaba we- 2014.
Umlando wamanani wokushintshana wazo zonke imali kubo bonke. Umlando wamanani wokushintshana wazo zonke imali kubo bonke. Umlando wezingcaphuno zemali zosuku ngalunye lwe 2014.
Izinga lokushintshaniswa nezilinganiso ze- 2013.
Umlando wamanani wokushintshana wazo zonke imali kubo bonke. Umlando wamanani wokushintshana wazo zonke imali kubo bonke. Umlando wesilinganiso sokushintshwa kwanoma iyiphi imali yezwe ye- 2013 nsuku zonke.
Umlando wezingcaphuno namanani wokushintshaniswa ku- 2012.
Nsuku zonke Rand isilinganiso sokushintshaniswa (isilinganiso) se 2012. Nsuku zonke Rand isilinganiso sokushintshaniswa (isilinganiso) se 2012. Database lomlando wesilinganiso sokushintshana.
Izilinganiso namanani wokushintshaniswa kwezimali zezwe zomhlaba we- 2011.
Rand losuku olufanele lwe 2011. Rand losuku olufanele lwe 2011. Umlando ophelele wezingcaphuno zohlobo lwemali nsuku zonke zonyaka ngamunye.
Izinga lokushintshwa kwemali, izingcaphuno zohlobo lwemali lomhlaba 2010.
Izinga lokushintshaniswa noma izingcaphuno zezimali zomhlaba 2010 enyangeni ngayinye nakuzo zonke izinsuku. Izinga lokushintshaniswa noma izingcaphuno zezimali zomhlaba 2010 enyangeni ngayinye nakuzo zonke izinsuku. Umlando ophelele wezingcaphuno zohlobo lwemali nsuku zonke zonyaka ngamunye.
Rand nezilinganiso ze 2009 ngosuku ngalunye. Rand nezilinganiso ze 2009 ngosuku ngalunye. Database lomlando wesilinganiso sokushintshana.
Izilinganiso namanani wokushintshaniswa kwezimali zezwe zomhlaba we- 2008.
Lapha ungathola isilinganiso sanoma yiluphi uhlobo lwemali nganoma yiluphi usuku. Lapha ungathola isilinganiso sanoma yiluphi uhlobo lwemali nganoma yiluphi usuku. Umlando wezingcaphuno ze- Rand nsuku zonke ze- 2008.
Izinga lokushintshaniswa nezilinganiso zezimali zomhlaba zomhlaba ze- 2007.
Umlando wezingcaphuno zemali zosuku ngalunye lwe 2007. Umlando wezingcaphuno zemali zosuku ngalunye lwe 2007. Izinga lokushintshana noma izingcaphuno ze Rand ye 2007 enyangeni ngayinye nakuzo zonke izinsuku.
Umlando wezingcaphuno ze- Rand nsuku zonke ze- 2006. Umlando wezingcaphuno ze- Rand nsuku zonke ze- 2006. Database lomlando wesilinganiso sokushintshana.
Izinga lokushintshwa kwemali, izingcaphuno zohlobo lwemali lomhlaba 2005.
Umlando wezingcaphuno zemali zosuku ngalunye lwe 2005. Umlando wezingcaphuno zemali zosuku ngalunye lwe 2005. Nsuku zonke Rand isilinganiso sokushintshaniswa (isilinganiso) se 2005.
Izinga lokushintshaniswa nezilinganiso ze- 2004.
Izinga lokushintshana losuku olufanele lwe 2004. Izinga lokushintshana losuku olufanele lwe 2004. Lapha ungathola isilinganiso sanoma yiluphi uhlobo lwemali nganoma yiluphi usuku.
Izinga lokushintshwa kwemali, izingcaphuno zohlobo lwemali lomhlaba 2003.
Rand nezilinganiso ze 2003 ngosuku ngalunye. Rand nezilinganiso ze 2003 ngosuku ngalunye. Umlando wezingcaphuno zemali zosuku ngalunye lwe 2003.
Umlando wamanani wokushintshaniswa nezilinganiso zezimali ze- 2002.
Izinga lokushintshana losuku olufanele lwe 2002. Izinga lokushintshana losuku olufanele lwe 2002. Umlando wamanani wokushintshana wazo zonke imali kubo bonke.
Izinga lokushintshaniswa nezilinganiso ze- 2001.
Umlando ophelele wezingcaphuno zohlobo lwemali nsuku zonke zonyaka ngamunye. Umlando ophelele wezingcaphuno zohlobo lwemali nsuku zonke zonyaka ngamunye. Umlando wezingcaphuno ze- Rand nsuku zonke ze- 2001.
Izilinganiso namanani wokushintshaniswa kwezimali zezwe zomhlaba we- 2000.
Rand losuku olufanele lwe 2000. Rand losuku olufanele lwe 2000. Izinga lokushintshaniswa noma izingcaphuno zezimali zomhlaba 2000 enyangeni ngayinye nakuzo zonke izinsuku.
Izinga lokushintshwa kwemali, izingcaphuno zohlobo lwemali lomhlaba 1999.
Lapha ungathola isilinganiso sanoma yiluphi uhlobo lwemali nganoma yiluphi usuku. Lapha ungathola isilinganiso sanoma yiluphi uhlobo lwemali nganoma yiluphi usuku. Nsuku zonke Rand isilinganiso sokushintshaniswa (isilinganiso) se 1999.
Umlando wamanani wokushintshaniswa nezilinganiso zezimali ze- 1998.
Izinga lokushintshana noma izingcaphuno ze Rand ye 1998 enyangeni ngayinye nakuzo zonke izinsuku. Izinga lokushintshana noma izingcaphuno ze Rand ye 1998 enyangeni ngayinye nakuzo zonke izinsuku. Sigcina umlando wazo zonke zezimali zamamayela ngosuku ngalunye.
Izinga lokushintshaniswa nezilinganiso zezimali zomhlaba zomhlaba ze- 1997.
Izinga lokushintshwa kwemali, izingcaphuno zohlobo lwemali lomhlaba 1996.
Nsuku zonke Rand isilinganiso sokushintshaniswa (isilinganiso) se 1996. Nsuku zonke Rand isilinganiso sokushintshaniswa (isilinganiso) se 1996. Izinga lokushintshanisa nezilinganiso ze 1996 ngosuku ngalunye.
Izinga lokushintshanisa nezilinganiso ze 1995 ngosuku ngalunye. Izinga lokushintshanisa nezilinganiso ze 1995 ngosuku ngalunye. Database lomlando wesilinganiso sokushintshana.